Midowga Musharaxiinta oo go'aan aadag kasoo saaray dibad-baxa Jimcaha - Caasimada Online
Home Warar Midowga Musharaxiinta oo go’aan aadag kasoo saaray dibad-baxa Jimcaha
Midowga Musharaxiinta oo go’aan aadag kasoo saaray dibad-baxa Jimcaha
Muqdisho (Caasimada Online) – Golaha midowga musharaxiinta Soomaaliya oo maanta shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay go’aankii ay xukuumadda xil-gaarsiintu ka soo saartay banaanbax ka dhaca magaalada Muqdisho.
Afhayeenka midowga musharaxiinta Daahir Maxamuud Geelle oo ka hadlay shirka jaraa’id ee golaha ayaa sheegay inay ku adkeysanayaan qabashada banaanbaxa ay iclaamiyeen maalinka Jimcaha ah ee soo socota, isagoo ku gacan sareyray go’aankii shalay ka soo baxay xukuumadda.
“In nala qasbo ma aqbali karno, waxaan go’aansanay inaan difaacano xuquuqdeena dastuuriga ah, waxaan rabnaa in laga waantoobo isbaarada naloo dhigtay, bulshada Soomaaliyeed waxaan leenahay ka soo qeyb gala mudaharaadkaas Jimcaha, waan ognahay culeys ayuu leeyahay, laakiin hadii aan iska dhaafno waa ‘gumoobeysaan’ dowladda federaalka waxay ku tumaneysaa qodobo dastuuri ah, waa inaan dhahno kuma tuma kartaan,” ayuu yiri Daahir Geelle.
Waxuu sheegay in hadafkoodu uu yahay inay Farmaajo ka quusiyaan damaciisa oo sida uu sheegay ah mid ku tumasho dastuur ah.
Sidoo kale Daahir Geelle waxuu sheegay in maanta ay shir gaar ah ka yeesheen xaaladda cakiran ee dalka, isla markaana ay wax yaabo badan isla odoraseen.
“Maalin dhaweed markii aan mudaharaadka aan sameynay isbaaro ayaa naloo dhigtay, taas oo lagu hagar daameeyey xuquuqdeena, isbaaro iyo argagixiso looma hoggaansamo, waxaan go’aasaanay inaan ku adkeysano difaaca xuquuqdeena sharciga ah, sidaas darteed maalinta Jimcaha ah waxaan dhigeynaa mudaharaad dastuuri ah,” ayuu hadalkiisa ku sii daray Daahir Geelle.
Wasiirka amniga Soomaaliya Xasan Xundubey oo shalay warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in xukuumaddu go’aamisay in aan la qaban karin wax isku imaatin ama banaanbax ah, sababo la xariira ka hor tagga faafitaanka cudurka Coronavirus oo aad ugu soo laba kacleeyey Soomaaliya, balse go’aankaas waxaa si cad u diidan musharaxiinta oo Muqdisho ka abaabulaya banaanbaxyo hor leh.